ဟာ့ဂျဒိုင်ရာယီ – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on December 16, 2009December 21, 2009 by kyawkyawoo	Posted in UncategorizedTagged ဟာဂျ ပထမနေ့, ဟာ့ဂျဒိုင်ရာယီ, ဟာ့ဂျ၏ဝတ်တရား, အစ်စ္စလမ်ဘာသာ ဝင်, ငြိမ်းချမ်းသောခံစားမှူထူး, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Haj Diary, Haj Diary Myanmar Translation, Hajj Diary, Holy Kaaba, Invitation to all Muslim Minorities, islam, Kaaba, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion	ဒီ Post ဟာ” Haj Diary” from Aljazeera News by Jamal Elshayyal ကို
၂၀၀၈ ဟာ့ဂျ ရာသီကဘာသာပြန်ခဲ့တာပါ။
ဒီနှစ် ဟာ့ဂျ အချိန်မှာ နောက်တခေါက်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Haj Diary 1: Arriving in Mecca
Haj Diary 2: Secure supplication
Allahu Akbar, Allahu Akbar” အလာ အရှင်မြတ်သာလျှင်အကြီးအကျယ်ဆုံး အရှင်ဖြစ်တော်မူသည် အာရုံဦးဝတ်ပြုရန်နှိုးဆော်သံနှင့် ကျွန်တော်အိပ်ရာမှနိုးလာသည်။
Grand Mosque သို့ဝတ်ပြုရန်ထွက်လာချိန်မှာ မနက်ငါးနာရီ သို့သော်လူများစည်ကားလွန်သည်။ Grand Mosque အတွင်းရှိ ကာ့အဘာဝတ်ကျောင်းတော်မြတ်နှင့် အနီးဆုံးနေရာရရန် သူ့ထက် ငါ တိုးဝှေ့သွားနေသောလူအုပ်ကြီးက လမ်းအပြည့်ပါ။
ကာ့အဘာဝတ်ကျောင်းတော်မြတ် ဟာ ကမ္ဘာ မူစလင် များအားလုံးဝတ်ပြု ရင် ဦးတိုက်တဲ့တခုတည်းသောအရပ်လဲဖြစ်ပါတယ်.
ရုတ်တရက် ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုသူ Imam ရဲ့ ဝတ်ပြု အစအသံနဲ့အတူဆူညံသံအားလုံး ဟာပကတိတိပ်ဆိပ်ခြင်းသို့ ပြောင်းသွားပါတယ်။
သန်းပေါင်းများစွာသော လူများညီညာသော အတန်းများနှင့် တူညီသောဝတ်ပြု လှုတ်ရှားမှူ ….မျက်နာမူရာ တစ်ခုထဲ ကာ့အဘာဝတ်ကျောင်းတော်… နောက်ပကတိငြိမ်သက်ခြင်း။
ရှေ့ဆောင်imamအသံမှလွဲ၍ ဘာအသံမှမကြားရပါ။ စကား ပြောသံ ကားသံလူဆူညံသံဘာမှမရှိ
စည်းကမ်းသေဝပ်စွာ ဝတ်ပြုနေသော မဆုံးနိုင်သည့်လူတန်း ကြီး၏ မြင်ကွင်းမှာ ရင်သတ်ရှူမောစရာပါ။
မနက်စာစား အပြီး ဟာ့ဂျ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသော ဆော်ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ အားမှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယို ရိုက်ရန် ထွက်ခဲ့ကြ၏။ဆော်ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တချိန်တဲလူအုပ်စုအများဆုံးစုဝေးတာ ဟာ့ဂျ အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက်ဆော်ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားက စံချိန်တင် ပါတယ်။ မကာ မြို့တခုထဲ အင်အား တစ်သိန်းလုံခြုံရေး အ တွက်ချထားပါတယ်။ အထူးတပ်ဖွဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဆေးရုံများမှ မီးသတ်အထိလိုလေသေးမရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
ဆော်ဒီတာဝန်ရှိသူများဟာဒီဟာ့ဂျ ပွဲတော်ကို အရင်နှစ်တွေကကြုံခဲ့ တဲ့ကြေကွဲဘွယ်ရာ လူသေပျောတ်မှူ မျိုးထပ်မဖြစ်ရန် အ စွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်။လူ ပေါင်းသုံးသန်းလောက် စုဝေးတဲ့ ဟာ့ဂျမှာ အထိအခိုက် အသေအပျောတ် အနည်း နဲ့အများရှိမှာ သဘာဝပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဟဂျ ကို ထိန်းသွား မဲ့ဆော်ဒီတာဝန်ရှိသူများရဲ့ပြင်ဆင်မှူကို ချီးကျူးထိုက်ပါတယ်။
တကဲ့ အရေး ကြီးတဲ့စမ်းသတ်မှူက ဟာဂျီလောင်းများ မီနာမှာ ဆေတန် ကို ကျောက်ခဲခုနစ် လုံး နဲ့ပေါက်တဲ့အချိန်ပါ။ တမန်တော်အီဘရာဟင်ကိုဆေတန်ကဖျားယောင် ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အမိန့် ကိုမနာခံအောင်ပြုလုပ်တဲ့နေရာဟာ မီနာဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာက ဟာဂျီလောင်းများ လူအုပ်ပြိုပိပြီး ရာပေါင်းမျာစွာ မီနာ ခဲပေါက်တဲ့နေရာမှာ အ သက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့ နေဝင်ချိန်ရောက်ပါပြီ။
Grand Mosque ရဲ့ လျပ်စစ်မီးအလင်းရောင်များက ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိန်ထိန် လင်းနေလေရဲ့။
မြတ်နိုးဖွယ်ရာဆွဲဆောင်မှူ နှင့်နေသားကျလာ ပေ မဲ့အံ့ဩမှုကလျော့မသွားပါ။
လမ်း လျှောတ်ရင်းနဲ့အတွေးနယ်ချဲ့ နေမိတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဟာဂျီလောင်းများ ဗလီအတွင်းလဲလျှောင်း အနားယူနေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့မူစလင်တွေအားလုံး ဟဂျပြုပြီးရင် မွေးစကလေးငယ်လိုအပြစ်မှကင်းစင်သွားတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ပိုနက်ရှိုင်း တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူသားအားလုံးဟာ အ သွေးအရောင်လူမျိုးဘာသာစကားမ တူပေမဲ့ ယုံကြည်မှူ တူရင်အား လုံးအတူတူ အစားပေးရမဲ့နေ့ကျရင် ဖန်ဆင်းရှင်အလာနဲ့တွေ့ကြရမှာပါ။
မကာ မြို့တော်ကိုရောက်တာ တရက်ပဲရှိပေမဲ့ဒီလိုနက်ရှိုင်းတဲ့ အ တွေးတွေ ဟာဂျီလောင်းများ အားလုံုး မှာရှိနေမှာသေခြာပါတယ်။
Haj Diary 3: A Hard day’s work
အခက်အခဲ များနှင်. ကြုံရသော နေ့ဆိုရင်လဲမမှားပါ။
ဒီနေ့ အစီအစဉ် အရ မကာ မှ မီနာ လွင်ပြင်သို့ သွားရန် ဖြစ်ပါတယ်။ မီနာမှာသုံးရက် နေပြီး ပြန်လာဖို့ အစီစဉ်ရှိပါတယ်။
အဖွဲ့သားအားလုံး စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်း မှူရတဲ့ အပြင် ဟာ့ဂျ ရုပ်သံတိုက်ရိုက် ထုတ် လွှင့်မှူကလဲအဆင်ပြေနေတာမို့အားလုံးစိတ်ဓတ်တက် ကြွနေပါ တယ်။
သို့သော် အလုပ်တဖက် နှင့်ဟာ့ဂျ ပြုကြရတဲ့ အတွက်နားချိန် မရှိပင်ပန်းကြပါတယ်။ ဝတ်ပြု ခြင်းပြီးတာနဲ့ဟာ့ဂျမှတ်တမ်း အတွက်မနားတမ်းရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်က ခရီး သွားနေရတဲ့ အချိန်မို့ပင်ပန်းမှူဒဏ်ကအစပျိုးလာပါပြီ။
မီနာလွင်ပြင်နားနီးကပ်လာတာနဲ့ ထောင်ပေါင်းများ စွာ သော အဖြူရောင်ယာရီတည်းအိမ်များကိုမဆုံးနိုင်အောင်တွေ့ရပါတော့တယ်။
ရောက်တာနဲ့ နားဖို့မစဉ်းစားနိုင် ပဲ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလွှင့်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။
ပြင်ဆင်ပြီးအဆင်သင့် ဖြစ်ချိန်မှာ ချိန်းထားတဲ့ ဧည့်သည် များရိုက်ကူးဖို့မရောက်လာသေးတဲ့အတွက် ပိုပြီးစိတ်ပင်ပန်းကြရပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ အာဖရိကန် အမေရိကန်စုံတွဲက ဒီလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာ အင်တာဗျူး အတွက်သဘောတူလိုက်လို့ သက်ပြင်းချနိုင်ပါတယ်။
ကျွန် တော် တို့အယ်ဂျာဇီရာအဖွဲ့က ရှာနေတာလဲ ဝါရှင်တန် ကအမေရိကန် မွတ်စလင်တဦးပါ။သုံးရက်တိတိရှာနေတဲ့အမေရိကန် မွတ်စလင်နဲ့မရိုက်ရပဲ အာဖရိကန် အမေရိကန်မွတ်စလင်စုံတွဲ နဲ့ တွေ့ရတာဖန်ဆင်းရှင် ရဲ့စီမန်မှူပါ။
မီနာမှာ ရှိတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ယာယီ ရွက်ထည်တဲတွေမှာ ဟာဂျီလောင်းများကိုနိုင်ငံအလိုက်နေရာချထားပေးပါတယ်။ သို့သော်လဲ အားလုံးဟာ ညီရင်းအကို မောင်နှမများပမာ ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနေကြပုံဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ အ ဆင်မပြေလှတဲ့ အင်ဒိယ နဲ့ပါကစ်စတန် လူမျိုးများ ဘေးခြင်းရှင်ပြီး ယာယီ ရွက်ထည်တဲ မှာအေးအေးလူလူ နေထိုင်ဆက်ဆံနေ ပုံပါ။ကင်မရာဆရာကလဲဒီမြင် ကွင်းကိုမလွှတ်တမ်းမှတ်တမ်းတင်နေပါရဲ့။
ဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာက အိုမာရီဂင်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် မွတ်စလင်နဲ့ တွေ့ဆုံရခြင်းပါ။
အိုမာဟာဟောလီး ဝုဒ် သရုပ်ဆောင်တဦးပါ။Chris Tucker ရဲ့ ကိုယ်စား Rush Hour Two စတန့်အခန်းတွေမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟဂျခရီးစဉ်အပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုဒီလို ပြောပါတယ်”It is here that you realise that in the end, you will face your Lord for who you are on the inside,
and not how you appear on the outside.”
ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအတွေးနယ်ချဲ့နေမိပါတယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ အဆင့်အတန်းနဲ့လူမျိုးစွဲဝါဒစွဲတွေကို ခွါချပြီး ကျွန်တော်တို့အခုနေသလိုအဝတ်ဆင်တူ အစားအတူ နေရ အိပ်ရတဲ့နေရာလဲ အတူဆိုရင် တယောက် နဲ့တယောက် ခြားနားမှူတွေဘယ်ရောက်သွားမှာ လဲ.?ဘယ်သူ့ကိုအတုယူအားကျ ရမှာလဲ.?
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်က ဒီလောကကြီးမှာအကျိုးနွံဆုံးနဲ့အရိုးသားဆုံးသူသည်ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အနီးဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆက်ပြီးတွေးမိတာက အခုလိုလူတိုင်းအဖြူရောင်ပိတ်စ နှစ်ပိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာကိုယ်လိုဝတ်ဆင် ထားသူလူပေါင်းသုံးသန်းနဲ့အတူအိပ်အတူစားနေချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့အတူစားနေတဲ့သူဟာဘယ်သူလဲလို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တာထာဝရဖန်ဆင်းရှင်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟာ့ဂျခရီးလမ်းညွန်Religious Tolerance in Muslim History